Free Yellow EA - Best Forex EA's | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
The free version nke Yellow ọtụtụ nghọta ọkachamara Advisor ọrụ dabere na mgbanwe dị mkpirikpi na-emekarị, na -emepụta ọnụahịa "okirikiri" dị na parameters. A na-arụ ahịa n'ime oke ala nke okirikiri a site na ịmepe ọnọdụ n'ọzọ dị iche iche na ọkwa dịgasị iche iche. Nke a na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ihe ịga nke ọma na njedebe na uru.
Yellow Free ezubere maka ire ahia ego ọ bụla na H1 timeframe.
Ọ bụghị njigide, ọ bụghị nchịkwa.
Free Yellow EA - Ngalaba
EAMagic10 - nọmba anwansi EA. A na-ejikwa nọmba anwansi "Internal": 5485574, 5485575, 5485576, 5485577, 5485578, 5485579, 5485580, 5485581, 5485582.
StrategyBlock2 - nwere ike ịtọ ma ọ bụ ụgha. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, EA na-eji 2-block nke usoro.
DD - kachasiri ohere iwepụta.
CommentOfOrder - ikwu okwu na iwu. Nwere ike iji uru ọ bụla.
TakeProfitInPoints - nweta uru na isi.
TrailingStop - nkwụsị na-akwụsị na isi.
LotMult2way - otutu na-amụba maka ọnọdụ imeghe ọzọ.
MaxPriceCorridor - uru nke okpuru ugwo na ihe maka Yellow Free imeghe ọnọdụ.
PipsOfIncrement - mmeba nke ugwo ugwo ahia mgbe o na-aputa uzo di nma.
Atụmatụ nke free version of Yellow EA:
Otu n'ime atụmatụ bọtịnụ ahịa nwere nkwarụ.
Ịgbanwe mgbanwe nza ahia adịghị, EA na-azụ ahịa nke 0.01.
Akwụsịghị Njikwa Akwụsị na-akpaghị aka.
A ga-emepe ọhụụ ọhụrụ naanị ma ọ bụrụ na enweghi oghere oghe na akaụntụ ahịa na ego abụọ ọzọ.
n'ihi na EURUSD abụọ, ntọala ndị a tụrụ aro ka edoziri site na ndabara.
A na-enye ntọala maka ụzọ abụọ ego abụọ na ntanaka nyocha.
Akwadoro onye na-ere ahịa - onye ọ bụla na-ere 5.